Vaovao - Inona no atao hoe Polyvinyl Chloride (PVC), ary inona no ampiasaina azy io?
Inona ny Polyvinyl Chloride (PVC), ary inona no ampiasaina azy io?
Polyvinyl Chloride (PVC) dia iray amin'ireo polymer thermoplastic be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao (eo anilan'ny plastika vitsivitsy be mpampiasa kokoa toa ny PET sy PP). Izy io dia plastika fotsy sy marefo (alohan'ny fanampiana ny plastika). Ny PVC dia efa ela kokoa noho ny ankamaroan'ny plastika izay nohazavaina voalohany tamin'ny 1872 ary novokarin'ny orinasa BF Goodrich tamin'ny taona 1920. Raha ampitahaina, plastika mahazatra maro hafa no namboarina voalohany ary lasa ara-barotra raha tsy tamin'ny taona 1940 sy 1950. Ampiasaina matetika amin'ny indostrian'ny fanorenana izy io fa ampiasaina ihany koa amin'ny famantarana, fampiharana ara-pahasalamana, ary fibre ho an'ny akanjo.
Ny PVC dia novokarina tamin'ny endrika roa, voalohany amin'ny polymer henjana na tsy plastika (RPVC na uPVC), ary ny faharoa kosa dia plastika malefaka. Ny PVC azo ovaina, vita amin'ny plastika na mahazatra dia malemy kokoa ary mora azo kokoa hiondrika noho ny uPVC noho ny fanampiana plastika toy ny phthalates (ohatra diisononyl phthalate na DINP). Ny PVC malefaka dia matetika ampiasaina amin'ny fanamboarana ho toy ny insulate amin'ny tariby elektrika na amin'ny gorodona ho an'ny trano, hopitaly, sekoly ary faritra hafa izay laharam-pahamehana ny tontolo iainana steril, ary amin'ny tranga sasany dia solon'ny rubber.
Ny PVC hentitra dia ampiasaina koa amin'ny fananganana toy ny fantsom-pantsaka sy ny fantsom-baravarana izay matetika resahina amin'ny teny hoe "vinyl" any Etazonia. Ny fantson'ny PVC dia matetika resahina amin'ny "fandaharam-potoanany" (ohatra ny fandaharam-potoana 40 na ny fandaharam-potoana 80). Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny fandaharam-potoana dia misy ny zavatra toy ny hatevin'ny rindrina, ny fanamafisana ny tsindry ary ny loko.
Ny sasany amin'ireo toetra mampiavaka ny plastika PVC dia misy ny vidiny somary ambany, ny fanoherana ny fahasimban'ny tontolo iainana (ary koa ny akora simika sy ny alkaly), ny hamafiny avo, ary ny tanjaka mihoampampana miavaka ho an'ny plastika amin'ny tranga PVC henjana. Izy io dia misy betsaka, be mpampiasa ary azo haverina mora foana (voasokajy amin'ny kaody famantarana 3 ").